agrimdip – agrimnepal
डडेल्धुरा स्थित स्याउले ट्राफिक प्रहरीमा एक यात्रुले फोन गरेर गुनासो पोखे –“सर, म बझाङबाट बसमा बिहानै हिँडेको हुँ । दिउँसोको दुई बजीसक्यो । बजारमा धेरै होटल भएको ठाउँमा गाडी रोक्नै मानेन् । एउटा मात्र होटल भएको ठाउँमा गाडी रोकेर खाना खुवाउन गुरुजीले होटल साहुलाई फोन गरिसकेका छन् । निकै भोक लागिसक्यो ।” यात्रुको गुनासो सुन्ने […]
एजेन्सी । इस्लामिक स्टेटका प्रमुख नेता अबु अबर अल–बग्दादी सैन्य आक्रमणमा मारिएको अमेरिकाको मिडियाले बताएका छन् । शनिबार सिरियाको उत्तर–पश्चिम भागमा संचालन भएको सैन्य कारबाहीमा वग्दादीको मृत्यु भएको सीएनएनले लेखेको छ । सीएनएनले एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी र सैन्य कारबाहीबारे जानकार स्रोतले यो घटनाबारे जानकारी दिएको लेखेको छ । सुरक्षा अधिकारीका अनुसार सैन्य कारबाहीको […]
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको १११औँ जन्मजयन्ती आज साहित्यिक कार्यक्रम गरी मनाइँदै
काठमाडाैं । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको १११औँ जन्मजयन्ती आज साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ ।विसं १९६६ कात्तिक कृष्ण औंसी, लक्ष्मीपूजाका दिन काठमाडौँको डिल्लीबजारमा जन्मिएका थिए । दश वर्षको उमेर बाट साहित्य रचना सुरु गर्नुभएका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन् । नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्तावादी, प्रगतिवादी धाराका प्रवर्तक […]
गाउँपालिका प्रमुख र वडाध्यक्षबीच यस्तो ग्याँग फाईट
काठमाडौ । सर्लाहीको एक गाउँपालिकाका अध्यक्ष (प्रमुख) र वडाध्यक्ष पक्षधरबीच ग्याँग फाईट (सामुहिक झगडा) हुँदा ३ जना घाईते भएका छन् । प्रदेश नं. २ को सर्लाही जिल्ला विष्णु गाउँपालिकामा जनप्रतिनीधि विचको विवाद उग्र बन्दै गएपछि विवादकै कारण गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडाअध्यक्ष समूह विच झडप हुदाँ ३ जना जना घाईते भएका छन भने एक जनाको अवस्था […]
काठमाडौं- वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ मुटुको धमनीको ब्लकेजको एन्जियोप्लाष्टी प्रविधिको सफल उपचारपछि आज घर फर्केका छन्। ग्राण्डी इन्टरनेशनल अस्पतालमा दुई दिनदेखि उपचाररत उनको एन्जियोप्लाष्टी अस्ति गरिएको थियो। अस्पतालका मेडिकल डिरेक्टर चक्र पाण्डेका अनुसार २ दिन अघि छाती दुखेर अस्पताल भर्ना भएका उनी आराम गरी आज घर फर्केका हुन्।
हामी गर्व गरौँ: तिहारमा स्वदेशी विद्युतबाटै देशभर झिलिमिली
तीन वर्ष पहिले बत्तीको पर्वको रूपमा रहेको तिहारमा सहजरूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने कुरा कल्पना बाहिरको विषय थियो। नेपाली मान्यताअनुसार लक्ष्मीले उज्यालो मन पराउँछिन् तर बत्तीको जोहो गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भने कसरी विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ताले सताउँथ्यो। घरायसी उपभोक्ताले साँझको समयमा समेत बत्ती बाल्न नपाएर निराश हुन्थे। उनीहरु सरकार र प्राधिकरणलाई गाली गरेर अँध्यारैमा […]
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बेथितीको चाङले भरिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव भबनाथ खतिवडाको कार्यकक्षमा रहेको कम्प्यूटरको दुरुपयोग भएको पाईएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव खतिवडाको कार्यकक्षमा रहेको कम्प्यूटर कार्यालय समयमा उनका छोराले गेम खेलेर बसेको देखिएको छ ।मन्त्रालयका उपसचिव खतिवडाले भने, ‘घर एक्लै हुने भएपछि छोरालाई यहाँ ल्याएको हुँ । आगामी दिनमा यस्तो हुन […]
भाइटीकाको साइत मंगलबार बिहान ११:५५ मा उत्तम
हिन्दूहरूको दोस्रो ठूलो सांस्कृतिक पर्व तिहार शनिबारबाट सुरु भएको छ । शनिबार कागतिहारसँगै सुरु भएको तिहार आइतबार कुकुर तिहार र लक्ष्मीपूजा, सोमबार गोबर्द्धन पूजा र मंगलबार भाइटीका गरेर समापन हुनेछ । नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिका अनुसार भाइटीकाको साइत मंगलबार बिहान ११:५५ मा उत्तम छ । उत्तम साइतबाहेक पनि दिनभर टीका लगाउन मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चांग निर्णायक समितिका सभापति डा. […]
पूर्व राज्यमन्त्रीसहित जुवा खालबाट २५ पक्राउ, २ करोड ७० लाख बरामद
प्रहरीले काैडा खेल्दै गरेको अवस्थामा पूर्वराज्यमन्त्री सहित २५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जुवा खालबाट नगद र चेक गरी २ करोड ७० लाख बढी रकम बरामद भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए। जुवा खालबाट २ करोड ६७ लाख नगद र ३ लाखका चेक बरामद गरिएको सुवेदीले बताए । महाराजगञ्जस्थित होटल साम्लाको […]
काठमाडौं, १० कात्तिक। तिहारको तेस्रो दिन लक्ष्मी पूजा गरिँदैछ । धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा गर्नाले घरमा लक्ष्मीको बास हुने तथा सुख शान्ति र ऐश्वर्य प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ । बत्ती नबालेको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने भनाइ छ। त्यसै अनुसार साँझ घरको चारैतिर सफासुग्घर गरी दैलो, संघार, झ्याल, ढोका, कौशी, अटाली, भ¥याङलगायतका ठाउँमा बत्ती […]